Cayayaanka - Mili
Dambiishaadii way madhnayd
wadarta qiimaha gaariga
Ku dhexjiro burooyin leh
Ku dabool xayndaab
Ku dabool frills
Teepee ku dheji sariirta
Roodhida wareega wareega
Buuxinta dabiiciga ah ee barkimooyinka
Gaararkii caadiga ahaa
Xirmooyinka iyo miisaska madaxa
Cayayaanka qolka jiifka iyo qolka carruurta.
Istuudiyaha Moi Mili wuxuu kaloo bixiyaa barkimooyin midab iyo jilicsan leh. Waxaan abuurnaa naqshado asal ah oo xiisa leh kuwaas oo runtii kobcin doona qolka jiifka ama qurxinta qolka carruurta. Barkimooyinku waxay noqon doonaan kuwo kufiican hurdo-galkii galabta, sidoo kale waxay kubad-dhaafsiisan yihiin fadhiga sahlan ee qolka fadhiga.
Waxay si fiican ugu habboon yihiin carruurta carruurtu ku xiran tahay oo teendhooyin kastaana waxay ku abuuri karaan jawi farxad iyo raaxo leh qolka. Alaabooyinkayada waxaa lagu xiraa daryeelka ugu weyn. Gogosha, gogosha la jeexjeexay iyo roogagga ayaa laga sameeyay suuf satin, gogosha dabiiciga ah iyo suufka qurxinta guriga. Buuxinta waxyaabaha lagu daro walxaha aan fiicnayn ayaa ah badeecad silikoon ah oo lugaha iska leh. Waxaan kugu casuumeynaa inaad fiiriso qurxinta qolka, kuwaas oo ah taabasho wanaagsan oo guri kasta!
Barkinta 'patchwork barkin' dhibco buluug ah '
Caleenta barkinta "malab"
Fariir barkin carrabka "ciid"
Barkinta suufka "Caramel"
Gawaarida gawaarida 'Patchwork barkin
Ku dheji barkimaan qolofta karaamaatka
Baakadda barkinta 'nacnaca Kirismaska'
Barkimo jilicsan oo leh qolof leh "casaan budada ah"
Dusha sare ee suufka buluuga ah "casaan wasakh leh"
Kalluunka loo yaqaan 'lien barkin' badda badda '
Sariir dusha sare ee Carusha Sand
Sinaan-kushaarka leysku xidho LEAF Morskie Oko
Baakadda barkinta 'nacnaca budada ah'
Caleen barkin leh "cagaar"
Barkimo jilicsan oo qolof leh "buluug"
Barkinta suufka "Marsala"
Laydh sariir Marsala qolof ah
Baakadda 'patchwork barkin' nacnac cagaaran '
Nala soo qor
© 2020 Mili Mili | Kana sheekayso
U isticmaal isbadal si aad ugu dhejiso foomka diiwaangelinta liiska dirista. Sii dhiirrigelin macaamiisha si ay ugu biiraan oo ay u dhisaan liiskaaga boostada.
Waad ku mahadsantahay ku soo biirista!